Buy Golden City For Rent (ID-657) (27Lks) in ရန်ကင်း on ipivi.com
Golden City For Rent (ID-657)
ကြည့်သူအရေအတွက်: 123 (+ 1 )
Golden City condo is located in Yankin Township, near Yankin Center. The living area condo is 1750 sqft, organized by Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Maid-room, Store room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms.
Asking Price - 2000 USD(Nego)
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် Golden City ကွန်ဒိုဖြစ်ပါသည်။ Golden City ကွန်ဒိုမှာ ၁၇၅၀ စတုရန်းပေအကျယ်ရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် နှစ်ခန်း၊ အိမ်အကူနေခန်း၊ စတိုခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ကွန်ဒိုအိမ်ခန်း၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ဒေါ်လာ၂၀၀၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
Warehouse Rent in North Okkalapa...
For SALE/Rental: New Bahan Condo...
Fully Furnished New and Luxury C...
Quality Service Apartment in Inn...
အမည်: Golden City For Rent (ID-657)